ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ကယ်လိုရီတွက်ပြီး စားဖို့လိုပါသလား – Healthy Life Journal
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ကယ်လိုရီတွက်ပြီး စားဖို့လိုပါသလား
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီ တွက်ချက်စားသင့်ပါသလား၊ အဲဒီလို စားတာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါသလား။
A. ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး စားသောက်တာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး စားသင့်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက်က တစ်နေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၁၆၀ဝ ထက် ပိုပြီး မစားသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကယ်လိုရီခွဲစားတဲ့ အခါမှာလည်း ညီညီမျှမျှခွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့လူတွေက ညစာကို လုံးဝမစားတာမျိုး လုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူက အစာကို နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏစားတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။